नेप्सेको सुधारका लागि प्रतिस्पर्धी नै आवश्यक - Karobar National Economic Daily
नेप्सेको सुधारका लागि प्रतिस्पर्धी नै आवश्यक
query_builderJune 19, 2017 11:55 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility2178
पछिल्लो समयमा पुँजीबजारलाई आधुनिकीकरण गर्न भन्दै नेपाल धितोपत्र बोेर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । तर, बोर्डको निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको आकारअनुसार २ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
यसै विषयलाई लिएर नेप्सेका कर्मचारीहरूले संयुक्त रूपमा सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्ने काम पनि गरेका छन् । कर्मचारीहरूले नयाँ स्टक एक्सचेन्जभन्दा पनि हालको नेप्सेलाई स्तरोन्नति गरेर मात्र अर्को ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । हालै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सेयर बजार आधुनिकीकरण गर्नका लागि बाधक बनेको समेत तर्क गर्दै आएको बोर्डले यसअघि पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनका लागि आवेदन मागेको थियो ।
त्यो समयमा चारवटा कम्पनीको आवेदनसमेत परेको थियो, तर पछि आएर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रक्रिया सेलायो । नेप्सेका लागि प्रतिस्पर्धी आवश्यक भए–नभएको सन्दर्भमा धेरै प्रतिवेदन पनि बने । ती प्रतिवेदनले नेप्सेलाई निजीकरण गर्न प्राथमिकता दिए । तर, कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हालसम्म पनि नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने काम हुन सकेको छैन ।
सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले निर्णय प्रक्रिया ढिलो भएको तथा बजारको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसकेको तर्क सरोकारवाहरूले राख्दै पनि आएका छन् ।
खुला बजारको अभ्यास भएसँगै पुँजीबजारको पहिचानका रूपमा रहेको नेप्सेलाई निजीकरण गरी प्रविधियुक्त पुँजीबजारको कल्पना सम्भव भएसम्म जोगाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ । बोर्डले नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउने निर्णय गरेसँगै बजारमा बढेको छलफलका सन्दर्भमा सरोकारवाहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :
हालको नेप्से सुधार नगरे तत्काल अर्को चाहिन्छ
अध्यक्ष, मर्चेन्ट बैंकर एसोसिएसन
पुँजीबजारको एक पक्ष भएर काम गरिरहेको हिसाबले व्यावसायिक रूपमा भन्नुपर्दा नेप्सेलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेको खण्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छैन । तर, नेप्सेले बजारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने नयाँ ल्याउन जरुरी नै भैसकेको छ । हालको प्रविधिको युगमा भैतिक रूपमा शाखा स्थापना गरेर सेयर कारोबार गरेर बजारको विकास हुने देखिँदैन ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार, पुँजीबजारको आकार र सूचीकृत कम्पनीलाई हेर्दा पनि पुँजीबजारका लागि प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छैन । तर, अर्को पक्षबाट हेर्दा हाम्रो नेप्सेले बजारप्रति निर्वाह गर्ने भूमिका पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ ।
हालको नेप्सेलाई चलायमान बनाउनका लागि निजीकरण गरेर जानुपर्छ । नेप्से सबल भएर बजारको भूमिका पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा आवश्यक छैन । हाल नेप्से सरकारी संस्था भएकाले यसको नेतृत्व तथा नियामक निकायले कसरी चलाउन खोजेको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
हालको नेप्सेले बजारको आश्यकता सम्बोधन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । सरकारी संस्था भएकाले सानो निर्णय गर्न पनि समय लाग्ने तथा प्रक्रियागत झन्झटले पनि समस्या देखिएको हो । हालको नेप्से आधुनिकीकरण गरेर सूचीकृत कम्पनीको आश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिन सक्छ भने आवश्यक छैन । जस्तो डेरिभेटिव मार्केट, सर्ट सेल तथा प्रदान गर्ने सेवाको स्तरमा गतिशीलता ल्याउनु जरुरी छ ।
नेप्सेको पनि सीमितता होलान् । यो निजी संस्था होइन । त्यसैले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जानुपर्दा सानो कामका लागि पनि धेरै समय खर्चिनुपर्छ । हालको नेप्से संस्थागत आधुनिक निजी संस्था बनाएको खण्डमा अर्को आवश्यक छैन । त्यो भूमिका नेप्सेले नगर्ने हो भने अर्को नभई पनि नहुने देखिन्छ । नेप्सेलाई दिएको जिम्मेवारी के हो भन्ने पनि क्लियर हुनुपर्छ ।
सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेर मात्र बस्ने हो कि बजारको आवश्यकताअनुसार काम गर्ने हो, स्पष्ट हुनुपर्ने समय आएको छ । नेप्सेले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसारको जिम्मेवारी लिएर निजीकरण गरेर काम गर्न सक्ने खण्डमा अर्को चाहिँदैन, नत्र आवश्यक छ । हरेक बजेटमार्फत निजीकरण गरिने भनेर व्यवस्था गर्ने तर काम नगर्ने हो भने प्रतिस्पर्धी आवश्यक छ । प्रतिपर्धा भएको खण्डमा सेवा पनि प्रभावकारी हुन्छ ।
खुला बजारको अभ्यास गरेको हुनाले पनि एकाधिकार बजार सिर्जना गरेर राख्नु हुँदैन । तर, सेयर बजारको सुरुवातदेखि आजसम्म नेप्सेले धानेको सन्दर्भ पनि बिर्सनु हुँदैन । नेप्सेको हालको सेवाले बजारको विकास हुँदैन । प्रविधिको युगमा पनि उपत्यकाभन्दा बाहिर दलाल कम्पनी पठाएको अवस्था छ । इन्टरनेटमा आधारित गरेको खण्डमा भौतिक उपस्थिति आवश्यक नै हुँदैन ।
सेयर बजार पूर्ण रूपमा डिजिटाइजेसनमा जानुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ ल्याएर हुन्छ कि हालको नेप्सेलाई आधुनिकीकरण वा निजीकरण गरेर हुन्छ, त्यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
नयाँ नल्याउने तर हाललाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेर वर्षौं समय लगाउँदा पनि समस्या बढेर जान्छ । त्यसैले ६ महिना वा एक वर्षमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको स्टक एक्सचेन्ज बनेको खण्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नहुन पनि सक्छ ।
नेप्सेका समस्या समाधान गरे राम्रो हुन्छ
अध्यक्ष,स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल
पुँजीबजारमा नयाँ स्टक एक्सेन्ज आए पनि कार्यसम्पादन देखिने भनेको दलाल कम्पनीको कामका आधारमा हो । तर, समग्र बजारको सन्दर्भमा नयाँ प्रविधि तथा प्रोडक्ट ल्याउने विषयलाई कम्पनी स्वयंले योजना गर्ने हो ।
हालको नेप्सेले बजारको आवश्यकताअनुसार काम नगरेको भएर नयाँ स्टक ल्याउन खोजिएको हुन पनि सक्छ । तर, नेप्सेले काम गर्न सकेन भन्ने किन गर्न नसकेको हो भन्ने सन्दर्भमा खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । सरकारी भएकै कारण काम गर्न नसकेको हो त ?
त्यसको हो भने नेप्सेलाई निजीकरण गरेर बजारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने स्तरको बनाएको खण्डमा राम्रो होला । हालको नेप्सेलाई नहेरी नयाँ चाहिन्छ भन्दा पनि नेप्सेको समस्याको जडलाई समाधान गर्नतर्फ जाँदा राम्रो हुन्छ ।
नेप्सेलाई आधुनिकीकरण गर्न खर्च लाग्छ । आधुनिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय निर्णय गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी संरचनामा काम गर्ने व्यक्तिले जोखिम लिन नचाहेको हुनाले पनि नेप्सेले बजार आवश्यकता सम्बोधनमा समस्या देखिएको हुन सक्छ । धेरै लामो समयदेखि निजीकरण गर्ने भनेको भए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन ।
निजीकरण भएको खण्डमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया छिटो हुन्छ, जसले गर्दा बजारको मागअनुसारको विकासका लागि नेप्सेलाई समस्या हँुदैन । बजारको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने अवस्था रहँदैन । अहिलेकै अवस्था नेप्सेको निजीकरण भएमा बजारलाई धेरै विश्वास दिने अवस्था हुन्छ । नयाँ आउने स्टक एक्सचेन्जले पनि कसरी काम गर्ने र बजारअनुसार कसरी चल्ने भन्ने सन्दर्भमा नियामक निकायले तोक्ने हो ।
बजार प्रतिस्पर्धी त हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा भएको खण्डमा लगानीकर्ताले प्रभावकारी सेवा पाउँछन् । अर्को एक्सचेन्ज आउँदैमा बजारको आवश्यकता पूरा गर्छ भन्ने पनि त छैन । नेप्सेलाई पूर्ण कम्प्युटरीकृत, लगानीकर्ता सचेतना तथा लगानीकर्तामैत्री बनाई अध्ययन अनुसन्धानसमेत गर्ने खालको बनाउन आवश्यक छ ।
करिब २३ खर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको मुलुकमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा अर्थतन्त्र, धितोपत्र बजार तथा बजारका लागि तयार भएका पूर्वाधारले पनि निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा पनि हुनुप-यो
अध्यक्ष,नेपाल सेयर लगानीकर्ता संघ
सेयर लगानीकर्ताको चासोको विषय प्रभावकारी सेवा हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आए पनि हालको नेप्सेलाई स्तरोन्नति गर्ने वा आधुनिकीकरण गरे पनि लगानीकर्ताले प्रभावकारी सेवा पाउनुपर्याे ।
सेयर सञ्चालनको साढे २ दशकसम्ममा पनि नेप्सेले बजारको आवश्यकताअनुसारको स्टक एक्सचेन्ज नहुनु भनेको समस्या हो । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सेयर बजारमा हुने अभ्यासबाट नेपाली लानीकर्ता बञ्चित भएकाले त्यो अझै लामो समयसम्म रहनु भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाले तत्काल काम गर्न व्यवस्थापकीय तथा नीति नियमले समस्या पार्न सक्छ । एउटा संस्थाको समस्याले समग्र बजार नै पछाडि पर्नु न्यायको कुरा होइन । लगानीकर्ताले नयाँ चाहियो वा पुरानो नै ठीक छ भन्नुभन्दा पनि सेयर बजारका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा पनि हुनुप¥यो । अझै पनि लगानीकर्तालाइ झुलाउन भएन ।
पछिल्लो समयमा नेप्सेले हालको कारोबार प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरेर अनलाइन कारोबार प्रणालकीो विकास गर्ने भनेको छ । नयाँ नै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन । पुरानोले राम्रो गरेको छैन । पुरानोले गर्न सकेको खण्डमा लगानीकर्ताले दुःख पाउने थिएनन् । बोर्डले आफ्नो मातहतका संस्थालाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले बोल्ने कुरा पनि होइन ।
नेप्सेको हालको कारोबार प्रणालीमा धेरै खरिद बिक्री चाप बढेको खण्डमा समस्या आउने अवस्था छ । त्यस्ता समस्या समाधानका लागि नेप्सेले दीर्घकालीन योजना गर्नुपर्ने हो । सरकारी संस्था भएकाले तत्काल दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेन । यो ठाउँमा नीजि कम्पनी भएको खण्डमा यस्तो समस्या दोहोरिने सम्भावना न्यून हुन्थ्यो ।
नेप्से हालको कारोबार प्रणालीनै सुधार गर्ने सुधार गर्ने भनेको धेरै समय बितिसकेको भए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन । त्यसैले नीजि क्षेत्रको र सरकारी गरेर २ वटा एक्सचेन्ज भएको खण्डमा लगानीकर्ता राम्रो सेवा पाउँछन् । दुई कम्पनी मध्ये जसले राम्रो र प्रभावकारी सेवा दिन्छ लगानीकर्ता त्यतै जान्छन् । हाल सरकारी संस्था त्यो पनि एक्लो भएकाले पनि लापबाही भएको हुनसक्छ ।
प्रतिस्पर्धा भएको खण्डमा दुवै ंसस्था बलियो र प्रभावकारी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । नेप्सेले नै असोजसम्म अनलाइन सेवा दिने भनेर तोकेको छ । त्यो अनुसार नभएको खण्डमा लगानीकर्ता पनि विकल्पतर्फ लाग्छन् ।
हामी खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यासमा भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न डराउनु भएन नि । प्रतिस्पर्धामा राम्रो सेवा दिने कम्पनी टिक्छ । लगानीकर्ताले खोजेअनुसारको काम गर्न नसक्ने जान्छन् । सरकारले नेप्सेको स्थापना गरेर पुँजी बजारको बाटो देखाइदियो । त्यसमा कसरी हिँड्ने भन्ने निर्धारण बजारले गर्छ ।
हालको बजार सानो भए पनि अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि बजारमा दैनिक ३ देखि ४ अर्ब कारोबार हुन्छ । सानो देखिए पनि बजार विस्तार हुने क्रममा छ । पूर्वाधार तयार हुँदैछन । डिम्याटपछि ४ गुणासम्म बजार विस्तार भएको छ । अनलाइन सुरु हुँदा १० गुणाले बजार विस्तार हुने सम्भावना छ ।
नेप्सेबाट सरकारले २० देखि २५ करोड सरकारले उठाएको छ । यसमा सरकारले सेवा शुल्क घटाएको खण्डमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्छ । दलाल कम्पनीको कमिसन घटाएर बोर्ड र नेप्सेले लिने कमिसन किन घटाएनन् ? राज्यले नागरिकको दायत्वि पुरा गर्ने हो । नेप्सेको प्रतिस्पर्धी आएमा हालको संस्थालाई सुधार गरेर जान पनि सक्छ ।
अर्थतन्त्र नेप्से नेपाल धितोपत्र बोेर्ड